Ho an’ireo vehivavy tiorka mitolona tsy hianjadian’ny herisetra, toy izao no navalin’ny filohampireneny : Atsaharo ny fitakiana fitoviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2019 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Français, বাংলা, русский, Español, 日本語, Deutsch, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Novambra 2014)
Ny 8 Martsa, Andro Erantany ho an'ny Vehivavy, diabe tamin'ny alina tao Istambul. Loharanon'ny sary:: 3.bp.blogspot.com.
Andro iray nialoha ny Andro Erantany ho an'ny Fanafoanana ny herisetra atao amin'ny Vehivavy, lasa ny filoha Tiorka, Recep Tayyip Erdoğan, indray no lohateny lehibe teny anaty gazety erantany noho ny iray tamin'ireo fanambaràny kivalavala efa mahazatra azy.
Nanoloana ny fivoriamben'ny Fikambanana Vehivavy sy Demaokrasia (KADEM) ary ny Ministeran'ny Politika Sôsialy sy ny Ankohonana, nambaran’Atoa. Erdoğan fa tsy hety mihitsy ny hiresaka fitovian'ny lehilahy sy ny vehivavy satria efa voajanahary sy ara-drafitra ny tsy fitoviana ara-batan'ny lahy sy vavy.
Nomen'ny fivavahantsika ny toerany ny vehivavy. Nomeny toerana hafa ny reny. Napetrany ho eo ambany tongony ny paradisa. Fa tsy teo ambany tongotry ny raimpianakaviana, teo ambany tongotry ny reny. Saingy izany, mbola misy ihany ny tsy mahatakatra azy. Tsy vita hohazavaina amin'ireo feminista izany. Tsy eken'izy ireo ny maha-reny azy.
Ho an'Atoa. Erdoğan, mifamatotra aminà fotokevitra henjana efa hatry ny ela ny ady ho an'ny zon'ny vehivavy, ka isan'ireny ny resaka fitoviana. Tsy tokony hiresaka fitoviana ireo vehivavy, hoy ny sosokeviny, fa tokony hifantoka amin'ny “fifanahantsahànana”.
Fa mila inona ireo vehivavy? Indraindray ry zareo manamafy ny tsy maintsy atao, izany no fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Ny ara-drariny dia ny fitoviana eo amin'ny samy vehivavy. Ara-drariny ny fitoviana eo amin'ny samy lehilahy. Na izany na tsy izany, ny zavadehibe dia ny fitovian'ny vehivavy rehetra manoloana ny lalàna. Ny fifanahantsahànana no ilain'ny vehivavy kokoa fa tsy ny fitoviana. Izay no rariny. Izany no ilaintsika.
Avy hatrany ny tenin'Atoa Erdoğan dia nandrehitra resabe. Ny sasany nanohana ny hoe izany fomba fijerin'ny filoha izany indrindra no antony mahatonga ny tsy fitoviana sy ny herisetra mifamatotra amin'ny maha-lahy na vavy amin'izao fotoana izao.
Zo hatrany am-pahaterahana ny fitoviana, ny fifanahantsahànana dia fanomezana vahana ireo matanjaka. Tsy manao afa-tsy manome vahana ny fitohizan'ny tsy fitoviana ireo adihevitra momba ny “fifanahantsahànana”. #LahySyVavyMitovy
Miposaka avy atsinanana ny masoandro. Mangotraka ny rano rehefa feno ny 100 degre. Roa ampitomboina roa manone efatra. #LahySyVavyMitovy
Ao Tiorkia, olana iray goavana.ny herisetra atao amin'ny vehivavy. Araka ny lazain'ny Sampana miahy ny vehivavy ao amin'ny Antokom-bahoaka Repoblikàna, vehivavy 255 no maty nisy namono nandritra ny volana folo voalohany tamin'ny 2014, no sady niparitaka be koa ireo endrika hafan'ny herisetra atao amin'ny vehivavy — am-bava, ara-tsaina sy ara-toekarena. Noho io antony io, nanana dikany manokana ho an'i Tiorkia ny Andro Erantany natao hanafoanana ny herisetra manjo ny Vehivavy, neken'ny Firenena Mikambana.
Marobe ireo nalahelo tamin'ny hoe toa tsy niraharaha ny dika sy ny fanambaràna ny fiharatsian'ny zavatra iainan'ireo vehivavy hatrany hatrany ny tenin'Atoa Erdoğan.
Ny filazàna fa tsy mitovy ny lahy sy ny vavy dia fanasàna iray ho an'ireo toerana izay misy famonoana vehivavy isanandro, ary any amin'ny toerana izay izakan'ny vehivavy an'arivony maro herisetra. #AtsaharoNyHerisetraAtaoAminNyVehivavy #FamonoanaVehivavy
Ny 25 Novambra, nivory nanerana an'i Tiorkia ireo fikambanana isankarazany mpiaro ny zon'ny vehivavy mba hanao hetsika sy fanoherana, nanao doka ny asa ataon-dry zareo teny anaty media sôsialy niaraka tamin'ireo tenifototra toy ny hoe #KadınaSiddeteHayır (#AtsaharoNyHerisetraAtaoAminNyVehivavy) sy #KadınKatliamıVar (#FamonoanaVehivavy). Raha ao Tiorkia, maty kokoa noho ny herisetra mifamatotra amin'ny resaka maha-lahy na vavy ireo vehivavy, ny takian-dry zareo dia ny fanaovana lalàna iray sy fepetra tsara kokoa ary mahomby, sy fiarovan'ny fanjakàna mifanaraka amin'ny tokony ho izy ho an'ny vehivavy.
Ary tsy izay tsy fitiavana manokana asehon'i Erdoğan momba ny fitoviana akory no handeha hanakana an-dry zareo.